Num 7 | Shona | STEP | Zvino nomusi Mozisi waakapedza / kumisa tabhenakeri nawo, nokuizodza, nokuitsaura nenhumbi dzayo dzose, nearitari, nemidziyo yayo yose, akati azvizodza nokuzvitsaura,
Zvipiriso zvamachinda amarudzi ane gumi nemaviri
1 Zvino nomusi Mozisi waakapedza / kumisa tabhenakeri nawo, nokuizodza, nokuitsaura nenhumbi dzayo dzose, nearitari, nemidziyo yayo yose, akati azvizodza nokuzvitsaura, 2machinda avaIsiraeri, vakuru vedzimba dzamadzibaba avo, vakauya nezvipo zvavo; ndivo vaiva machinda amarudzi, ndivo vakanga vari vatariri vavanhu vakaverengwa; 3vakauya nezvipo zvavo pamberi paJehovha, zvinoti: Ngoro nhanhatu dzaiva namatende, nenzombe dzine gumi nembiri, machinda maviri ane ngoro imwe, mumwe nomumwe ane nzombe imwe; vakauya nazvo pamberi petabhenakeri. 4Zvino Jehovha akataura naMozisi akati, 5"Gamuchira izvozvo kwavari, kuti mabasa etende rokusangana aitwe nazvo; unofanira kuzvipa vaRevhi, mumwe nomumwe zvinoringana mabasa ake." 6Ipapo Mozisi akagamuchira ngoro idzo nenzombe, akazvipa vaRevhi. 7Akapa vanakomana vaGeshoni ngoro mbiri nenzombe ina, zvakaringana mabasa avo. 8Akapawo vanakomana vaMerari ngoro ina nenzombe sere, zvakaringana mabasa avo, vachirairwa naItamari, mwanakomana waAroni mupirisiti. 9Asi haana kupa vanakomana vaKohati chinhu nokuti ndivo vakanga vane basa reimba tsvene; vaifanira kuzvitakura pamafudzi avo. 10Machinda akauya nezvipo zvokutsaurira aritari nomusi wayakazodzwa nawo, machinda akauya nezvipo zvawo pamberi pearitari. 11Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, "Ngavauye nezvipo zvavo zvokutsaurira aritari, muchinda mumwe nomumwe nomusi wake."
12Zvino akauya nechipo chake nezuva rokutanga akanga ari Nashoni, mwanakomana waAminadhabhu, worudzi rwaJudha. 13Chipo chake yakanga iri ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 14nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 15nenzombe imwe negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa, 16nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 17nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaNashoni, mwanakomana waAminadhabhu.
18Nezuva repiri Netaneri, mwanakomana waZuari, muchinda waIsakari, akauyisa chipo chake. 19Akauya nechipo chake, chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 20nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 21nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 22nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 23nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaNetaneri, mwanakomana waZuari. 24Nezuva retatu Eriabhu, mwanakomana waHeroni, muchinda wavana vaZebhuruni, akauya. 25Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu,nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta chive chipiriso choupfu; 26nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 27nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 28nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 29nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaEriabhu, mwanakomana waHeroni. 30Nezuva rechina Erizuri, mwanakomana waShedheuri, muchinda wavana vaRubheni, akauya. 31Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 32nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 33nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 34nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 35nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaErizuri, mwanakomana waShedheuri.
36Nezuva reshanu Sherumieri, mwanakomana waZurishadhai, muchinda wavana vaSimiyoni, akauya. 37Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 38nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 39nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 40nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 41nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaSherumieri, mwanakomana waZurishadhai.
42Nezuva retanhatu Eriasafi, mwanakomana waDheueri, muchinda wavana vaGadhi, akauya. 43Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu, " 44nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 45nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 46nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 47nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaEriasafi, mwanakomana waDheueri.
48Nezuva rechinomwe Erishama, mwanakomana waAmihudhi, muchinda wavana vaEfuremu, akauya. 49Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 50nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 51nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 52nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 53nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaErishama, mwanakomana waAmihudhi.
54Nezuva rorusere Gamarieri, mwanakomana waPedhazuri, muchinda wa vana vaManase, akauya. 55Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 56nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 57nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 58nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 59nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaGamarieri, mwanakomana waPedhazuri.
60Nezuva repfumbamwe Abhidhani, mwanakomana waGidheoni, muchinda wavana vaBhenjamini, akauya. 61Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 62nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 63nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 64nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 65nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaAbhidhani, mwanakomana waGidheoni.
66Nezuva regumi Ahiezeri, mwanakomana waAmishadhai, muchinda wavana vaDhani, akauya. 67Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 68nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 69nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 70nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 71nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaAhiezeri, mwanakomana waAmishadhai.
72Nezuva regumi nerimwe Pagieri, mwanakomana waOkirani, muchinda wavana vaAsheri, akauya. 73Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 74nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 75nenzombe imwe, negondohwe rimwe negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa; 76nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 77nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaPagieri, mwanakomana waOkirani.
78Nezuva regumi namaviri Ahira, mwanakomana waEnani, muchinda wavana vaNafutari, akauya. 79Chipo chake chaiti: Ndiro imwe huru yesirivha, kurema kwayo kwakanga kuri mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe wesirivha wamashekeri ana makumi manomwe, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; zvose zviri zviviri zvakanga zvizere noupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, chive chipiriso choupfu; 80nendiro imwe yendarama yamashekeri ane gumi, izere nezvinonhuwira, 81nenzombe imwe, negondohwe rimwe, negwayana rimwe regondohwe regore rimwe, chive chipiriso chinopiswa, 82nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; 83nenzombe mbiri, namakondohwe mashanu, nenhongo shanu dzembudzi, namakwayana mashanu amakondohwe egore rimwe, chive chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa; ndicho chaiva chipo chaAhira, mwanakomana waEnani. 84Ndicho chipo chokutsaurwa kwearitari nomusi wayakazodzwa nawo namachinda aIsiraeri. Ndiro huru dzesirivha dzine gumi nembiri, nemidziyo yesirivha ine gumi nembiri, nendiro dzendarama dzine gumi nembiri; 85ndiro imwe huru yesirivha yakasvika mashekeri ane zana namakumi matatu, nomudziyo mumwe nomumwe mashekeri ana makumi manomwe; sirivha yose yemidziyo yose yakasvika mashekeri ane zviuru zviviri namazana mana, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; 86nendiro dzine gumi nembiri dzendarama, dzakanga dzizere nezvinonhuwira, imwe neimwe yakanga ina mashekeri ane gumi, zvichienzaniswa neshekeri reimba tsvene; ndarama yose yendiro yakasvika mashekeri ane zana namakumi maviri; 87nzombe dzose dzezvipiriso zvinopiswa dzakasvika nzombe dzine gumi nembiri, namakondohwe ane gumi namaviri, namakwayana amakondohwe egore rimwe ane gumi namaviri, nezvipiriso zvazvo zvoupfu; nenhongo dzembudzi gumi nembiri, chive chipiriso chezvivi; 88nzombe dzose dzechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa dzakasvika nzombe dzina makumi maviri neina, namakondohwe ana makumi matanhatu, nenhongo dzembudzi dzina makumi matanhatu, namakwayana amakondohwe egore rimwe ana makumi matanhatu. Ndicho chipo chokutsaurwa kwearitari, shure kwokuzodzwa kwayo. 89Zvino Mozisi akati apinda mutende rokusangana, kuti ataure naye, akanzwa inzwi richitaura naye, richibva pachifunhiro chokuyananisa, chakanga chiri pamusoro peareka yechipupuriro, richibva pakati pamakerubhi maviri: akataura naye.